नेपालका चर्चित कलाकारहरुले ‘शत्रु गते’ को सामाजिक सञ्जालमा यसरी गरे प्रशंसा, हेर्नुस कसले के लेखे ? – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentनेपालका चर्चित कलाकारहरुले ‘शत्रु गते’ को सामाजिक सञ्जालमा यसरी गरे प्रशंसा, हेर्नुस कसले के लेखे ?
नेपालका चर्चित कलाकारहरुले ‘शत्रु गते’ को सामाजिक सञ्जालमा यसरी गरे प्रशंसा, हेर्नुस कसले के लेखे ?
March 25, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Kollywood, News 0
शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘शत्रु गते’ ले दैनिक जसो ब्यापार आक्रमक बनाउदै गैरहेको छ । शुक्रबारको तुलनामा शनिबारको कलेक्सन दोब्बरले बढेको छ । चलचित्रको प्रचार प्रसार सञ्चारमाध्यमको भन्दा पनि ’वर्ड अफ माउथ’ निकै प्रभावकारी देखियो । यतिबेला धेरै जसो युवा युवती आफ्नो बर्षभरीको पढाईको भविष्य निर्धारण गर्ने परिक्षामा लागेकाले पनि उनीहरु हलसम्म पुग्न सकेका छैनन् । तैपनि चलचित्रको ब्यापार थामिनसक्नु भएको छ ।
निर्माण टिमले एसईईको परिक्षा सकिएसँगै आफ्नो ब्यापार झनै बढ्ने अपेक्षा गरेको बताउदै आएका छन् । निर्माण टिमले दर्शकहरुको ओईरो लागेकोमा त खुशी व्यक्त गरेको छ नै त्यो भन्दा पनि चलचित्र हेरेर निस्कने दर्शकको सुखद प्रतिक्रियाले निर्माण टिमलाई अझ बढी हौसाएको छ । किन भने दर्शकको मुखबाट आएको सकारत्मक प्रतिक्रियाले अरु दर्शकलाई हलसम्म तान्न मद्दत गर्छ भन्ने निर्माण टिमको बुझाई रहेको छ । र त्यो कुरा साँचो पनि हो ।
चलचित्र हेरेर बाहिरिने दर्शकहरुले करिब १५/२० बर्षपछि राम्रो चलचित्र हेर्न पाएको बताउने गरेका छन् । त्यो बाहेक विभिन्न सेलिवे्रटीहरुले समेत चलचित्रकोबारेमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका प्रतिक्रियाले पनि दर्शकको उपस्थिति झन बढ्दो छ । साहित्यकार अमर न्यौपानेले आफ्नो फेसबुक पेजमा चलचित्र भरपुर मनोरञ्जन दिएको भन्दै चलचित्रका कलाकार तथा निर्देशक प्रदिप भट्टराई लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिदै चलचित्रको सफल्ताको कामना गरेका छन् ।
त्यस्तै, सुविन भट्टराईले आफ्नो फेसबुक पेजमा हरेक दृश्यबाट कमेडी र ड्रमाको सस्याना खोल्साहरु निस्केर मनोरञ्जनको ठुलो नदीमा मिसिने चलचित्रको नाँउ शत्रु गते भएको लेखेका छन् । उनले चलचित्र हेरुन्जेल कतै पनि बोर नलाग्ने भन्दै सबैलाई हेर्न जान समेत अनुरोध गरेका छन् । उनले निर्देशक प्रदिप भट्टराई लगायत सबैलाई बधाई तथा सफल्ताको शुभकामना समेत व्यक्त गरेका छन् ।
हाँस्य कलाकार समेत रहेका सिताराम कटेल ‘धुर्मुस’ ले आफ्नो फेसबुक पेजमा आदरणीय हाँस्य कलाकार मह जोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठ रहरिवंश आचार्यको महसञ्चारको प्रस्तुति आदरणीय किरण केसी दाईको ‘शत्रु गते’ हेरियो भनेर लेखेका छन् ।
उनले सिनेमा हेरुन्जेल कहि कतै बोर लाग्ने ठाँउ नभएको भन्दै सिनेमाले एकताको सन्देश दिएको लेखेका छन् । धुर्मुसले चलचित्रको नाम शत्रु गते होईन मित्रु गते हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै नायिका बर्षा राउतले चलचित्रलाई बधाई दिदै चलचित्र ‘बल्कबष्टर’ बन्ने लेखिकी छिन् । उनले निर्देशक भट्टराईदेखि सबैलाई बधाई भनेर लेखेकी छिन् ।
त्यस्तै, प्रचण्डमान श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुक पेजमा ‘शत्रु गते’ लाई दक्षिण भारतीय चलचित्रसँग तुलना गरेका छन् । उनले यो स्तरको चलचित्र बनाउने आँट गरेको भन्दै प्रदिप भट्टराईको निकै तारिफ गरेका छन् । उनले मह जोडी किन सर्वाधिक रुचाईएका कलाकार हुन भन्ने कुरा यो चलचित्र हेरेपछि थाहा हुने बताएका छन् ।
त्यस्तै, अशिम शाहले चलचित्र बेजोड बनेको भन्दै निर्देशक भट्टराईको कामलाई तारिफ गरेका छन् । उनले हरिवंश आचार्यको बेजोड प्रस्तुतिको समेत दिल खोलेर प्रशंसा गरेका छन् ।
प्रदिपले आफ्नो पहिलो कमाईबारे मुख खोल्दा जसिताले खोलिन आफ्नो पहिलो प्रेम (भिडियो)